Book – Page 15 – Muslim Book
အပိုင်း – ၄ ၁၉၇၈ ခုနှစ်တွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနှင့် မြန်မာတို့ ချုပ်ဆိုခဲ့သည့် လျှို့ဝှက်စာချုပ်…… – ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေမဟုတ်ဘူးလို့ မြန်မာအစိုးရက ကြေငြာနေပေမယ့် ၁၉၇၈ ခုနှစ် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံတို့ရဲ့ လျှို့ဝှက်သဘောတူညီချက်မှာ မြန်မာအစိုးရဟာ ရိုဟင်ဂျာတွေကို နိုင်ငံသားအဖြစ် တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုထားတယ်လို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် မီဒီယာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Dhaka Tribune
အပိုင်း – ၃ ရခိုင်ဘုရင်များလက်ထက် စစ်ပွဲများမှသုံ့ပန်းများအဖြစ်ဖမ်းစီးလာသောမွတ်စ်လင်မ်များကိုလယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်၌၎င်းအမူထမ်းလုပ်ငန်းခွင်များတွင်၎င်းခိုင်းစေရန် ၁၅ရာစုလောက်မှစ၍မွတ်စ်လင်မ်များရခိုင်သို့စတင်ရောက်ရှိလာကြသည်ဟု’ ဗိုလ်ခင်ညွန့်ရဲ့စာအုပ် အနောက်ဘက်တံခါးပြသနာစာအုပ်မှာ ရေးထားတော့အဲ့ဒီအချက်ကြောင့်ပင်လျှင် ရခိုင်ဒေသမှာတိုင်းရင်းသားမွတ်စ်လင်မ်တွေရှိတယ်လို့ဝန်ခံခြင်းပင်မဟုတ်လား? … အဲ့လိုဆိုရင်သူအာဏာရှိစဉ်က ရခိုင်ပြသနာကိုဘာလို့အမှန်အတိုင်းမရှင်းခဲ့တာလဲ? မရှင်းခဲ့တဲ့အပြင်ပိုပြီးမီးလောင် သွေးချောင်းစီးအောင်ရခိုင်ဗုဒ္ဓဝင်တွေကိုအဘက်ဘက်ကအားပေးအားမြောက်ကူညီခဲ့တဲ့ဆိုးကျိုးတွေကြောင့် ယနေ့ ရခိုင်ဒေသ ပျက်စီးခြင်းမလှပျက်စီးနေရတာမို့လားဗျာ ထပ်ဆင့်ဗိုလ်ခင်ညွန့်စာအုပ်မှာယင်းခေတ်ကာလကပင်ပေါ်တူဂီနှင့် ရခိုင်တို့သည် ကျွန်အရောင်းအဝယ်လုပ်ကြရာမှာ ဘင်္ဂါလီမွတ်စ်လင်မ်အချို့ ရခိုင်သို့ရောက်ရှိလာကြသည်ဟု’ ရေးသားဖော်ပြထားတယ် မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်ပင် ရောက်ရှိပါစေ ဗိုလ်ခင်ညွန့်ရဲ့သခင်ကြီး ဦးနေဝင်းစိတ်ကြိုက်
အပိုင်း ၂ ၁၉၄၂ ခုနှစ် လူမျိုးရေးအဓိကရုဏ်း၏ အနိဠာရုံများမှသင်ခန်းစာရရှိခဲ့သောမောင်းတောမြို့မှ ဦးအွမ်ရာမီယာ(Omra Miah) ဦးဆောင်သည့် ရခိုင်မွတ်စ်လင်မ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သည် ပါကစ္စတန်ခေါင်းဆောင်မိုဟမ္မဒ်အာလီဂျင်နားထံသို့ သွားရောက်လျှက်မိမိတို့၏ စိုးရိမ်သောကများကိုတင်ပြခဲ့ကြသည်။(ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးအချိန်ကာလဖြစ်သည်။) ဦးအွမ်ရာမီယာ(Omra Miah) ဦးဆောင်သည့် ရခိုင်မွတ်စ်လင်မ်ခေါင်းဆောင်များအားမိမိတို့၏အနာဂါတ်အတွက်စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမူမဖြစ်ကြပါရန်နှင့် မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းနေသော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းထံ ဆက်သွယ်၍ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကူညီပေးပါမည်ဟု ပါကစ္စတန်ခေါင်းဆောင် ဂျင်နားက ကတိပေးခဲ့လေသည်။ မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးအတွက်(ဘိလပ်)အင်္ဂလန်သို့သွားစဉ်ဗိုလ်အောင်ဆန်းတို့အဖွဲ့သည်အနာဂါတ်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၏မြို့တော်ဖြစ်လာမည့် ကာရာချီမြို့၌ ခရီးတစ်ထောက်ဝင်ရောက်ရပ်နား၍
အပိုင်း ၁ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့ဘက်မှနေ၍ဖက်စစ်ဂျပန်တပ်များမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းတို့ဝင်ရောက်လာခြင်းကြောင့်ဗြိတိသျှတပ်များမြန်မာနိုင်ငံမှအိန္ဒိယနိုင်ငံအတွင်းတို့ ဆုတ်ခွာသွားခဲ့ကြသည်။ဗြိတိသျှတပ်များအထွက် ဂျပန်တပ်များအဝင်၌ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာကင်းမဲ့မူကိုအကြောင်းပြု၍ ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များထဲမှ အစွန်းရောက်သူအချို့ဦးဆောင်လျှက်မြေပုံမြို့နယ် ရက်ချောင်း ပင်းခရှိ မွတ်စ်လင်မ်များကို တစ်ဦးမကျန်ရွာလုံးကျွတ် သတ်ဖြတ်မူကြောင့် 1942 ခုနှစ်တွင် ရခိုင် မွတ်စ်လင်မ် လူမျိုးရေးအဓိကရုဏ်း စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ မြေပုံမြို့နယ်ပြီးနောက်ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လူမျိုးရေးဝါဒီခေါင်းဆောင်များသည်မင်းပြားမြို့နယ် ကျောက်တော်မြို့နယ်များ၌ပါ ဆက်လက်သတ်ဖြတ်မူများလုပ်ဆောင်ခြင်းကြောင့် ထိုဒေသနေမွတ်စ်လင်မ်အချို့သည် အဝတ်တစ်ထည်ကိုယ်တစ်ခုဖြင့် တောတွင်းခရီးမှ မွတ်စ်လင်မ်အများစုရှိရာ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်သို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားခဲ့ကြသည်။